Dhacdo argagax leh oo ka dhacday Muqdisho iyo bulshada oo si weyn u hadal heysa - Awdinle Online
Dhacdo argagax leh oo ka dhacday Muqdisho iyo bulshada oo si weyn u hadal heysa
Waxaa maanta xaafada Kaawo Godey ee degmada Dharkeenley gobolka Banaadir laga helay iyada oo si xun loo dilay meydka gabar 10-sano jir aheyd oo mudo labo maalin ehelkeeda ka maqneyd.
Meydka gabadha oo lagu magacaabayay Nafisa Cumar Geelle ayaa laga helay guriga qoyskeeda , waxaana meydka lagu qariyay digsiyo waa weyn oo ah nuuca lagu kariyo raashinka xiliyada sabta ama amuurta la qabo.
Wiil ehel la’ah gabadha meydkeeda la helay ayaa Warbaahinta u sheegay in ka argagaxeen markii gabadhii mudo labo maalin ka maqneyd kuna hoolanaayeen baadi goobkeeda iyada oo si xun loo jir dilay meydna ah ka heleen gurigii ay kunooleed.
” Gabadha labo maalin ayey maqneed waxaana lagu jiray baadi goobkeeda, waxaana maanta la arkay iyada oo meyd ah oo lagu qariyay labo digsi oo nuuca sabta lagu kariyo joodarina kor laga saaray, ma naqaan cida dishay iyo sababta keentay, ciidanka ayaana baaritaano wada” ayuu yiri wiil ilmo adeer la ah gabdha la dilay.
Ciidamada booliiska gaar ahaan kuwa dambi baarista CID-da oo gaaray guriga laga helay meydka gabadha la dilay ayaa xiray aabaha iyo gabadha meydkeeda guriga laga dhax helay, waxa ayna ciidamada wadaan baaritaano ku aadan cida dishay gabadha.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo qaabilay Diblomaasiyiin ka Socda Midowga Yurub & UK
Next articleLiiska Xubnaha cabashada laga yahay ee guddiga doorashooyinka oo la soo bandhigay